XOG CUSUB: Hal Arrin oo Farmaajo & Kheyre ku kicisay Mucaaradka (Waqti Kororsi?) | Hobyo Media Online
XOG CUSUB: Hal Arrin oo Farmaajo & Kheyre ku kicisay Mucaaradka (Waqti Kororsi?)
Warar hoose oo ay heshay Wakaalada Warqaad.com ayaa sheegaya in Xubnaha Mucaaradka ee ku shiraya Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya ay doonayaan in waqti kororsi aysan sameyn Dowlada uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo.
Masuul ka tirsan Xubnaha ka qeybgalaya Shirarkaasi xasaasiga ah ayaa inoo sheegay in Madaxda Dowlada Federaalka Soomaaliya ay wadaan qorshe ay waqtiga ku kororsanayaan, halka Mucaaradka iyagoo ka feejigan doonistaasi ay bilaabeen Abaabulka Xiisado burburin kara qorshaha waqti dheereysiga.
Xisbiyada ugu waa weyn ee kasoo horjeeda Dowlada, Xildhibaanada ugu saameynta badan Mucaaradka iyo Siyaasiyiin Madax banaan oo aan ku qanacsaneyn hanaanka ay wax u wado Dowlada ayaa Kulamo gaar gaar ah iyo kuwa ay beesha Caalamka la yeelanayaan ka wada Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhawaan la sheegay inuu kulamo uu la qaatay Waxgarad iyo Siyaasiyiin u bandhigay Waqti kororsi loo sameeyo Dowlada maadaama Diyaarinta Nuuca Doorashada ee Dalka laga qabanayo iyo Dhameystirka Dastuurka ay yihiin howlo culus.
Tan iyo markaas Mucaaradka oo ka cabsi inaysan ku dhiri karin Magaalada Muqdisho maadaama Dowlada ay cadaadis badan ku heyso Xubnaha kasoo horjeeda waxay ku qulquleen Kenya halkaasoo ay kaga dhawaaqeen go’aano ay ka mid yihiin inay dhisayaan Xukuumad cusub maadaama sida ay sheegeen ay fashilantay xukuumadda uu hoggaamiyo Ra’siiul wasaare Kheyre.